နှိုငျးယှဉျနျူကလီးယား Fission ကွန်ရက်မှကောက်ယူရရှိ fusion
နျူကလီးယား Fission နှင့်နျူကလီးယား Fusion နောက်ကွယ်မှာအဆိုပါသိပ္ပံ
နျူကလီးယား Fission & နျူကလီးယား Fusion အကြားခြားနားချက်
fission နှင့်ပေါင်းစပ်: ယူရေနီယမ်-235 အားဖြင့် facilitated နိုင်အနုမြူဗုံးပေါက်ကွဲမှုနှစ်မျိုးရှိပါသည်။ Fission, ရိုးရှင်းစွာ ထား. , တစ်ဦးအက်တမ်နျူကလိယကာလပတ်လုံးစွမ်းအင်သန်းရာပေါင်းများစွာ Volts 100 သန်း emitting (နှိုင်းယှဉ်ဒြပ်ထုများသောအားဖြင့်နှစ်ဦးကိုအပိုင်းအစများ) အပိုင်းအစများသို့ကိုစူးသောနျူကလီးယားတုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်စွမ်းအင်ထဲမှာပေါက်ကွဲခြင်းနှင့်အကြမ်းဖက်နှင်ထုတ်ခံရသည်ကို အဏုမြူဗုံး ။
တစ်ဦးကပေါင်းစပ်တုံ့ပြန်မှု, အခြားတစ်ဖက်တွင်, များသောအားဖြင့်တစ်ဦး fission တုံ့ပြန်မှုနဲ့စတင်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် fission (အနုမြူ) ဗုံးနဲ့မတူပဲ, အ Fusion ကို (ဟိုက်ဒရိုဂျင်) ဗုံးဟီလီယမ်အရေးပါသို့အမျိုးမျိုးသောဟိုက်ဒရိုဂျင်အိုင်ဆိုတုပ်၏အရေးပါ၏ဖျူးအနေဖြင့်၎င်း၏အာဏာကိုတထစ်ချ။
ဤဆောင်းပါးတွင်အဆိုပါဆြေးြေိံး A-ဗုံး သို့မဟုတ် အက်တမ်ဗုံး ။ တစ်ဦးအက်တမ်ဗုံးအတွက်တုံ့ပြန်မှုနောက်ကွယ်မှအကြီးအကျယ်အာဏာကိုအတူတကွအက်တမ်ကိုင်သောတပ်ဖွဲ့များထံမှပေါ်ပေါက်။ ဤရွေ့ကားတပ်ဖွဲ့များကဲ့သို့ပင်နိုင်ငံရေးပါတီများကင်းမဲ့ပေမယ့်သံလိုက်အဖြစ်အတော်လေးတူညီနေကြသည်မဟုတ်။
အက်တမ် ပရိုတွန်, နျူထရွန်နှင့်အီလက်ထရွန်: သုံးဦး Sub-atomic အမှုန်များ၏အမျိုးမျိုးသောနံပါတ်များနှင့်ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းထားပြီးနေကြသည်။ ပရိုတွန်နှင့်နျူထရွန်တို့သည်အီလက်ထရွန်တာနေရောင်န်းကျင်ဂြိုလ်ကဲ့သို့နျူကလီးယပ်လှည့်ပတ်နေစဉ်အက်တမ်၏နျူကလိယ (ဗဟိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်) ဖွဲ့စည်းရန်အတူတကွ Cluster ။ ဒါဟာအက်တမ်၏တည်ငြိမ်မှုကိုဆုံးဖြတ်ရန်ဤအမှုန်များ၏လက်ကျန်ငွေနှင့်အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။
အများစုမှာဒြပ်စင်အမှုန် accelerators အတွက် bombardments အားဖြင့် မှလွဲ. ခွဲထွက်ဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့နေသောအလွန်တည်ငြိမ်ပြီးအက်တမ်ရှိသည်။
အားလုံးလက်တွေ့ကျတဲ့ရည်ရွယ်ချက်များအဘို့, အဘယ်သူ၏အက်တမ်ကိုအလွယ်တကူခွဲနိုင်ပါတယ်တစ်ခုတည်းသောကသဘာဝဒြပ်စင်ယူရေနီယံ, ရှိသမျှကိုသဘာဝဒြပ်စင်များနှင့်တစ်ဦးထူးထူးခြားခြားမြင့်မားတဲ့နျူထရွန်-to-ပရိုတွန်အချိုး၏အကြီးဆုံးအက်တမ်နှင့်အတူတစ်ဦးမိုးသည်းထန်စွာသတ္တုတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ဒီအမြင့်မားတဲ့အချိုးအစားက၎င်း၏ "splitability" မြှင့်တင်ရန်ပါဘူးဒါပေမယ့်ယူရေနီယမ်-235 နျူကလီးယား fission တစ်ခုခြွင်းချက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအောင်ပေါက်ကွဲမှုလွယ်ကူချောမွေ့ရန်၎င်း၏စွမ်းရည်အပေါ်အရေးပါသော bearing ရှိပါဘူး။
နှစ်ခုသဘာဝကျကျ-ဖြစ်ပေါ်အိုင်ဆိုတုပ်ရှိပါတယ် ယူရေနီယံ ။ သဘာဝယူရေနီယမ်တစ်ဦးချင်းစီအက်တမ်တွင်ပါရှိသော 92 ပရိုတွန်နှင့် 146 နျူထရွန် (92 + 146 = 238) နှင့်အတူအိုင်ဆိုတုပ် U-238 အမျိုးအစားအများစုပါဝင်သည်။ ဒီနှင့်အတူရောနှောထားသောအက်တမ်နှုန်းသာ 143 နျူထရွန်နှင့်အတူဦး-235 များ၏ 0.6% စုဆောင်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဒီပေါ့ပါးအိုင်ဆိုတုပ်၏အက်တမ်ခွဲနိုင်ပါတယ်, ထိုသို့ "fissionable" နှင့်အနုမြူဗုံးဗုံးရာတွင်အသုံးဝင်သည်။
နျူထရွန်-မိုးသည်းထန်စွာဦး-238 င်း၏နျူထရွန်-မိုးသည်းထန်စွာအက်တမ်ကတည်းကအဖြစ်ကောင်းစွာအဏုမြူဗုံးကစားရန်အခန်းကဏ္ဍရှိပါတယ်တဲ့ယူရေနီယမ်ဗုံးတစ်ခုမတော်တဆကွင်းဆက်တုံ့ပြန်မှုကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ပြီး plutonium ဗုံးတွင်ပါရှိသောနျူထရွန်စောင့်ရှောက်ခြင်း, သွေနျူထရွန်နေမှုကိုအာရုံလွှဲနိုင်ပါတယ်။ U-238 ကိုလည်း plutonium (ပူး-239), ကိုလည်းအနုမြူဗုံးဗုံးအတွက်အသုံးပြုမယ့်လူလုပ်ရေဒီယိုသတ္တိကြွဒြပ်စင်ထုတ်လုပ်ဖို့ရန် "ပြည့်" ဖြစ်နိုင်သည်။
ယူရေနီယံနှစ်ယောက်စလုံးအိုင်ဆိုတုပ်သဘာဝကျကျရေဒီယိုသတ္တိကြွပါ၏ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပြိုကွဲမည့်၎င်းတို့၏အခုတော့ဒီကြီးမားတဲ့အက်တမ်။ လုံလောက်သောအချိန် (ရာပေါင်းများစွာနှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏) ပေးထားယူရေနီယမ်နောက်ဆုံးမှာသူကဦးဆောင်သို့လှည့်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်အများအပြားမှုန်ဆုံးရှုံးပါလိမ့်မယ်။ ယိုယွင်း၏ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည်အလွန်တစ်ကွင်းဆက်တုံ့ပြန်မှုအဖြစ်လူသိများသည်အဘယ်အရာကိုအတွက်အရှိန်နိုင်ပါသည်။ အဲဒီအစားသဘာဝနှင့်တဖြည်းဖြည်းပြိုကွဲမည့်၏, ထိုအက်တမ်အတင်းအကြပ်နျူထရွန်နှင့်အတူ bombardments အားဖြင့်ခွဲနေကြသည်။
တစ်ခုတည်းနျူထရွန်ထံမှတစ်ဦးကထိုးနှက်သေးငယ်ဒြပ်စင် (မကြာခဏဘေရီယမ်နှင့်ရူပတွန်) ၏အက်တမ်ဖန်တီးခြင်းနှင့်အပူနှင့် gamma ဓါတ်ရောင်ခြည် (ရေဒီယိုသတ္တုကြွ၏သြဇာအာဏာအရှိဆုံးနှင့်သေစေလောက်ပုံစံကို) ထုတ်ခြင်း, လျော့နည်း-တည်ငြိမ် U-235 အက်တမ်ခွဲဖို့လုံလောက်ပါတယ်။
ဒီအက်တမ်ကနေ "အားလပ်ချိန်မှာ" နျူထရွန်သူတို့နှင့်အဆက်အသွယ်လာသောအခြား U-235 အက်တမ်ခွဲရန်လုံလောက်သောအင်အားနှင့်အတူထွက်ပျံသန်းတဲ့အခါဒီကွင်းဆက်တုံ့ပြန်မှုတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ သီအိုရီမှာ, ဒါပေါ်မှာ ... နျူထရွန်လွှတ်ပေးရန်နှင့်လိမျ့မညျသောအခြားအက်တမ်, ခွဲလိမ့်မည်ဟုနျူထရွန်ကိုလွှတ်တံ့သောတစ်ဦးတည်းသာဦး-235 အက်တမ်, ခွဲထွက်ဖို့လိုအပ်ပေသည်။ ဒါဟာတိုးတက်မှုဂဏန်းသင်္ချာမျှမက, ကဂျီဩမေတြီသည်နှင့်တစ်စက္ကန့်တစ်ဦးသန်းအတွင်းရာအရပ်ကိုကြာပါသည်။
အထက်တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့တစ်ဦးကွင်းဆက်တုံ့ပြန်မှုကိုစတင်ရန်နိမ့်ဆုံးပမာဏကိုစူပါအရေးပါအစုလိုက်အပြုံလိုက်အဖြစ်လူသိများသည်။ စင်ကြယ်သောဦး-235 သည် 110 ပေါင် (50 ကီလိုဂရမ်) ဖြစ်ပါသည်။ အဖြစ်မှန်မှာပိုထိုကဲ့သို့သောဦး-235, ဦး-238 နှင့် Pu ကိုအဖြစ်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်ဒါကြောင့်ဘယ်သူမျှမကယူရေနီယံသို့သော်အစဉ်အဆက်အတော်လေးသန့်ရှင်း၏။
ယူရေနီယမ်အက်တမ်ဗုံးအောင်အတွက်အသုံးပြုတစ်ခုတည်းသောပစ္စည်းမဟုတ်ပါဘူး။ နောက်ထပ်ပစ္စည်းဟာလူလုပ်ဒြပ်စင် plutonium တို့၏ပူး-239 အိုင်ဆိုတုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
plutonium သာဒါ useable ပမာဏယူရေနီယမ်ကနေထုတ်လုပ်ထားရပါမည်, မိနစ်ခြေရာတွေအတွက်သဘာဝကျကျတွေ့ရှိရပါသည်။ အဏုမြူဓာတ်ပေါင်းဖိုများတွင်ယူရေနီယမ်ရဲ့ပိုလေးဦး-238 အိုင်ဆိုတုပ်နောက်ဆုံးမှာ plutonium ဖြစ်လာ, အပိုအမှုန်ဆည်းပူးရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေနိုင်ပါတယ်။
plutonium သူ့ဟာသူအစာရှောင်ကွင်းဆက်တုံ့ပြန်မှုမစတင်ပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်ဒီပြဿနာကပိုမြန်သည့် plutonium သူ့ဟာသူထက်နျူထရွန်ကိုချွတ်ပေးသည်တဲ့နျူထရွန်ရင်းမြစ်သို့မဟုတ်အလွန်အမင်းရေဒီယိုသတ္တိကြွပစ္စည်းရှိခြင်းအားဖြင့်ကျော်လွှားဖြစ်ပါတယ်။ ဗုံးအချို့အမျိုးအစားများမှာ element တွေကို Beryllium, polonium အရောအနှောကိုဤတုံ့ပြန်မှုအကြောင်းကိုရောက်စေဖို့အသုံးပြုသည်။ သာသေးငယ်တဲ့အပိုင်းအစ (အဖြစ်အနည်းငယ်သာ 22 အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်သော်လည်းစူပါအရေးပါအစုလိုက်အပြုံလိုက်ခန့်က 32 ပေါင်ဖြစ်ပါတယ်) လိုအပ်ပါသည်။ အဆိုပါပစ္စည်းနှင့်ကိုယ်နှိုက်၏ fissionable သည်မဟုတ်, မျှသာ သာ. တုံ့ပြန်မှုမှဓာတ်ကူပစ္စည်းအဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။
ယောဟနျသ Fitch: အ Steamboat ၏တီထွင်သူ
ဗိုလ်မှူးလိဂ်ဘေ့စ်ဘော (MLB) သမိုင်းအတွက်ထိပ်တန်းလက်ဝဲ Fielder
PGA Tour အဆိုပါသတိရအောက်မေ့ပြိုင်ပွဲ
ကို '80s ၏ထိပ်တန်းယဉ်ကျေးမှုကလပ်သီချင်းများ
အစ္စလာမ့်ဗလီဗိသုကာတစ်ဦး Mihrab ဆိုတာဘာလဲ
Beginners များအတွက်ထိပ်တန်း 10 တန်ဂိုသီချင်းများ
အဆိုပါ Wallace လိုင်းဆိုတာဘာလဲ
Sikhism ရဲ့သန့်ရှင်းသောဘုရားအညီကျမ်းစာလာသည်, အဆိုပါ Guru Granth ၏ Authors သူကားအဘယ်သူ Sre?
သူတို့ (ဒါဝိဒ်သည်ဂရက်ဂိုရီ၏မရဏ) သူမရဲ့မကောင်း
ရှေးဟောငျးအီဂကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် - တစ်ဦးကဗီဒီယိုကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
သင့်ကနေသည်ခုန် Improve5သိကောင်းစရာများ
HL Mencken အားဖြင့်မရဏ၏ပြစ်ဒဏ်,
Wartburg ကောလိပ် GPA, SAT နှင့် ACT ဒေတာများ
တစ်ဦးက New ကောလိပ်အခန်းဖော်မေးပါ 8 မေးခွန်းများ
အီတလီသု: ပုံ Italiani